Nab Electronic - Changzhou longxin Makiinado Co., Ltd
Jinka Electronic waa wax aasaasiga ah ee soo saarta qaybaha filim qaro weyn. Waa nooc ka mid ah Jinka kaas oo si siman u qasan by budada adag iyo dareeraha organic ka dib soo giringiriyey dhagax by saddex duuban.
Sida nooc cusub oo ah qalab, Jinka elektarooniga ah waa ka xoogbadan, qalabka circuit dhaqanka (silig iska caabin ah, tube kulaylinta korontada, iwm) iyo leedahay sifooyinka of ilaalinta deegaanka, oolnimada sare iyo keydinta tamarta, iyo kharashka ku dhow yahay inuu in ee wax-dhaqameedyada , taas oo shaki la'aan noqon doontaa jihada codsiga ugu muhiimsan ee mustaqbalka.
Longxin mar walba sii koraya technology iyo hagaajinta qalabka. Dhowr waxyaabaha cusub ee ku haboon yihiin saarka Jinka elektaroonik ah oo aynu hore u cadaato utility ee iyaga ka. Waxaan hayo iskaashi la CETC, BTR, BYD iyo wixii la mid ah.
Talinaynaa qalab electronic, Jinka, ES / DS superfine taxane sax ah saddex dhagax duuban, taxane DYS Haydarooliga Laba dhagax duuban, taxane YS / YSS dhagax Haydarooliga shan duuban, taxane YSP rullaluistemadka Haydarooliga saddex dhagax,
line Product: line Automatic saarka Jinka elektarooniga ah